युगाैँ हिँडिसकेकाे बाटाे « Salleri Khabar
युगाैँ हिँडिसकेकाे बाटाे
बरण्डामा ममीसँग गफ गरिराखेको थिएँ । चाख लाग्दा गहिरा कुरामा गफ गइराखेको थियो । त्यो बेला मनमा भने केही कुराहरु नाँच्दै थिए तर त्यसको नृत्य अनुहारमा देखिएको थिएन । दिक्क दिक्क लागिराखेको थियो । भन्नु पर्दा, केही लेखौँ र कतै पोस्ट गरौँ भन्ने कुराले ग्रसित थिएँ ।
गफ गर्दागर्दै एका एक तल रोडमा एक जना बुढा मान्छे हिँडिराखेको देखेँ। उनी मेरो आँखा अगाडि एक्कासि आइपुगेका थिए । लगभग उनी ७० वर्षका त थिए नै होला । हेर्दा गज्जब चिटिक्क परेका, सफा चट थिए । सेतो-सेतो सफा कुर्ता, वाङ्ले सुरूवाल, जुत्ता अनि हेन्डिल गोलो भएको लठ्ठी थियो । कपाल एकातिर सर्लक्क कोरेका थिए । कपाल धेरै जसो सेतो थियो र थोरै कालो कपालले ‘म पनि छु है’ भन्दै हात उठाएको जस्तो देखिन्थ्यो । विशेष उनी आनन्दले बिस्तारै चुपचाप हिँडिराखेका थिए र आँखा जमिनमा अडिएको थियो ।
उनलाई देख्ने बित्तिकै अर्कै अनुभूति भो । मनमा चलेको नृत्य एकाएक बन्द भयो । त्यो दृश्य नै धेरै कुरा सुनाउने खालको थियो । सुनायो पनि । मैले आँखाबाट धेरै कुरा सुनेँ र मनले त्यो तस्वीरलाई मजाले छाम्यो । त्यो दृश्य धेरै बेर त रहिरहेन, ती बुढा मान्छे एक समयपछि बिलाए तर त्यो क्षण मेरो मनमा बसिरह्यो । उनलाई देखेको त्यो एक क्षणमा मैले खोइ कसरी एक्कासि अर्कै अनुभूत गरेँ ।
केवल एउटा मौन दृश्यले यति धेरै बोलेको मैले कमै अनुभव गरेको छु । मिठो थियो त्यो दृश्य, मनलाई छुने । साथै त्यस्तै थियो मौसम पनि, पुरै साँझ र अलिअलि बतास । उनको त्यो सुस्त हिँडाइ सुस्तरी हिँड्ने सूर्यजस्तो थियो । जसले सुस्तरी नै भए पनि कयौँ युग हिँडिसकेको छ, कयौँ युग बाँचिसकेको छ । हाँस्दा थोते चन्द्रमा देखिन्थ्यो अनुहारमा । त्यो दृश्यले मलाई अनेक कुरा सोंच्न बाध्य बनायो । उमेर, जोस, रहर, सपना, आँसु, हाँसो, कर्तव्य र बुढेसकाल । जीवनलाई बाँध्दाबाँध्दा हात-पाखुरा खुकुला हुन्छन् । कसिएका छालहरू जीवनको तापले पग्लिन्छन् । मुजा बनी निधारभरी, गालाभरी, हातभरी समयको परिभाषा बस्छ। दृश्य कविता जस्तै कोमल थियो तर त्यो कविताको कवि काे थिए ? दृश्य कुनै चित्र जस्तै मौन थियो तर त्यो चित्रको चित्रकार को थिए ?
‘तिमी मलाइ चिन्दैनौ र मैले पनि तिमीलाई पहिलोपल्ट देखेको हुँ । ए बुढा कति सुस्तरी हिँडेको ?तिम्रो सुस्त हिँडाइले मसिनो आवाजमा मेरो मनलाई अनेक कुरा सुनाइ राखेको छ।’
‘पहिले त म पनि बडो जोसिलो थिएँ ।’
‘हाम्रा पनि सपना कहाँ सानो थियो र !’
‘सबै रहर त कहाँ पुरा हुन्छन् ।’
‘आँसु हाँसो दुबै रैछ यहाँ।’
‘जीवन यस्तै हो रहेछ छोरा ।’
तिमीसँगै मलाइ पनि तिम्रो हात समातेर बिस्तारै हिँड्न मन लाग्यो । आज जसको लठ्ठीको आवाजले जीवनको ध्वनि सुनाइराखेको छ, जसको मौनताले नै जीवन व्याख्या गरिराखेको छ । जमिनलाई मात्र हेरेर हिँडेको देख्दा आकाशमा केही छैन भन्न खोजे जस्तो लाग्छ । ए हजुरबा के तिमीलाई मन लाग्दैन फेरि जवान हुन ? के मन लाग्दैन बेसरी हाँस्दै फेरि संसारको कुरा गर्न ? के मन लाग्दैन फेरि सिगरेट तानेर रवाफ देखाउन ? के मन लाग्दैन जीवन, राजनीति, प्रेम, कला, दर्शनका अनेक कुराहरु गर्न ? जीवनको पल्लो छोरमा आइपुगेपछि पुरा नभएका प्यारा सपना बारे कस्तो ख्याल आउँछ बा ? मलाई त अहिलेसम्म कसरी बाँच्ने भन्ने कुराको फिकिर नै छैन, छ त सिर्फ कसरी उठ्ने र कसरी उड्ने । आज तिम्रो मुखबाट सुन्न मन लाग्यो कोसिस गर्नु, उठ्नु, उड्नु , लड्नु, जित्नु, हार्नु, हराउनु र जिउनुको परिभाषा के हो ? जित्नु र जिउनुको फरक के हो र महत्त्व के हो ? त्याग के हो ?
कति एक्लै लठ्ठी टेकेर टुकु टुकु हिँड्छौ । जाऔँ आज कुदेर त्यो समयमा पुगौँ जब तिम्रो सपनाको पनि संसार देख्ने आँखा थियो । जब तिम्रो सपनाले तिमीलाई पनि रातभर सुत्न दिंदैन थियो । जब तिम्रो जोसलाई कुनै अन्धो हुरीले पनि रोक्न सक्दैन थियो । जाऔँ त्यो प्रेमको समयमा जब तिमी आफ्नो मनलाई कसैको कामुक यौवनमा लिप्त पार्थ्यौ। जब तिमी पनि कसैको यादमा विक्षिप्त भएका थियाै । तिमीलाई कहाँ पुग्नु छ ? यति बिस्तारै हिँडेर घर कहिले पुग्छौ तिमी ? अनि कस्तो चिटिक्क परेर हिँडेको ? मनमा पुरा नभएको रहर कति छ ? ओठमा नखिल्खिलाएको हाँसो कति छ ? अचेल त साना जस्तो जिद्दी गर्न मन लाग्छ र ? यति बुढा भयौ के बाआमाको याद आउँछ ? बुहारीले कति माया गर्छे बा ? दाँत कति बाँकी छन् बा ? साँच्चै साथ कति बाँकी छन् बा ? कुनै तस्बीर हेर्दा त एउटा युग नै याद आउँदो हो है । तिमीलाई दुख दिने मान्छेलाई त्यहीं लठ्ठीले भुँडीमा हानिदिनु है बा ! जिम्मा मेरो भो ।
ए बुढा मान्छे सुनन, यसो जब म बाहिर हेर्छु । किसान खेत रोपिरहेको, मान्छे हिँडिरहेको, बच्चाहरु खेलिरहेको र समय आफ्नै गतिमा चलिरहेको । एक्कासि लाग्छ यो दृश्य दुर्लभ छ । भोलि तिमी यो बाटोमा नहुन पनि सक्छौ, भोलि समयको अनुहार बदली हाल्छ। हामी कति दुख गर्छौँ बाँच्न, एक पल्टका निम्ति मिठो हाँस्न, सुमधुर सम्बन्ध गाँस्न । हाम्रा लागि कोही कति प्रिय छन्, कोही कति महत्त्वपूर्ण छन् । जब मान्छेको मुस्कान हेर्छु, उ: त्यहाँ पर्तिर गुञ्जिरहेको हाँसो सुन्छु, प्रफुल्लित आफूलाई निहार्छु । मलाई अचम्म लाग्छ। म छक्क पर्छु । थाहा त सबैलाई छ हामी सबै एक दिन यहाँ रहदैनौँ तर त्यसको डर हाम्रा अनुहारमा कहाँ र ? हामी त मस्त बाँचिरहेका छौँ सोंच्दै सायद सपना भोलि पुरा हुन्छ । तिम्रो त्यस मौन दृश्यले मलाइ यसको उत्तर दिए जस्तै लाग्यो । सत्य डर लाग्दो कहाँ हुन्छ र ? डर त केवल डरहरुको ।
विराज चालिसे हामीलाई राणा शासन अत्यन्त क्रूर थियो, खराब थियो भनेर पढाइयो तर राणा शासनमा भयका
विज्ञानले कयौँ वर्ष अघि नै एउटा तथ्य प्रमाणित गरिसकेको थियो कि हामीले जति सुकै बल